Siansa ara-tsôsialy - Wikipedia
Ny siansa ara-tsôsialy na siansa ara-piaraha-monina na siansa sôsialy na siansan' ny fiarahamonina dia vondron-taranja siantifika mandinika ny toetra ara-tsôsialy sy ny zava-misy amin' ny olona. Ampififanoherina amin' ny siansan' ny zavaboary sy ny siansa marina ny siansa sôsialy.
Ny siansa sôsialy dia andalinana ny fiarahamonin' ny olombelona, sy ny fifamalian' asa ara-piarahamonin' ny olona tsirairay sy ny vondron' olona ary ny tontolo manodidina azy. Arakaraka ny fomba fiasa, ny siansa sôsialy dia mety hiraika mankany amin' ny siansan' ny zavaboary sy ny siansan' ny fahalalana, na mankany amin' ny filôzôfia sy ny fiolonana.
Maro ireo taranja ao amin' ny siansa sôsialy, dia ny sôsiôlôjia, ny psikôlôjia, ny ekônômia, ny demôgrafia, ny fitantanana, ny teôrian' ny fandaminana, ny jeôgrafia, ny siansa pôlitika, ny tantara, ny antrôpôlôjia, ny etnôlôjia, ny etnôgrafia, ny seksôlôjia, ny kriminôlôjia, ny haiteny, sns.
Araka ny dika notsorina avy amin' ny rakibolana, ny siansan' olombelona dia mandinika ny kolontsain' ny olombelona, ny tantarany, ny zava-bitany, ny fomba fiainany sy ny toetran' ny tsirairay sy ny fiarahamonina, kanefa ny siansa ara-tsôsialy dia mandinika ny fiarahamonin' ny olombelona, izay mamondrona ny olombelona amin' ny antony maro samihafa. Ny siansan' ny mahaolona sy ny siansa ara-tsôsialy dia mifanatrika amin' ny siansan' ny zavaboary sy ny siansan' ny tontolo iainana. Ireo mitondra amin' ny fomba manokana, ny fifanatrehan' ny filôzôfia natoraly sy ny filôzôfia môraly (misy ny sosiôlojia, ny pôlitika, ny toekarena sns.). Ny fiteny anglisy momba ny siansa sôsialy dia niseho tamin' ny taona 1824 ao amin' ny bokin' i William Thompson: An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive to Human Happiness; applied to the Newly Proposed System of Voluntary Equality of Wealth.
((fr))((en))Revues.org, portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales
((fr))Persée, portail de revues scientifiques en SHS numérisées
((fr))((en))((es)) Fondation Maison des sciences de l'homme Appui aux développements des sciences humains et sociales
((fr)) Portail des sciences humaines et géographiques
((fr)) revue des sciences humaines
((fr)) ((en)) Le portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales : Revues.org (www.revues.org)
((fr)) Le portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales numérisées : Persée (persee.fr)
((fr))((en))((es)) Fondation Maison des sciences de l'homme Appui aux développements des sciences humains et sociales (www.msh-paris.fr)
((fr)) Le site de l'Académie des sciences morales et politiques (www.asmp.fr)
((fr)) Le site de la Revue des Sciences Sociales
((fr)) La revue en-ligne interdisciplinaire en sciences sociales EspaceTemps.net
La théorie de la médiation de Jean Gagnepain par Jean-Luc Lamotte Archived Aprily 24, 2018 at the Wayback Machine, Introduction à la théorie de Médiation et propos.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Siansa_ara-tsôsialy&oldid=1040678"
Voaova farany tamin'ny 2 Desambra 2021 amin'ny 11:04 ity pejy ity.